Platanus x hispanica को विशेषता र हेरचाह | सबै रूखहरू
मोनिका सान्चेज | 03/05/2022 14:00 | सजावटी रूखहरू, फिचस, पर्णपाती सजावटी
छवि - विकिमेडिया / SABENCIA गुइलर्मो Céar रुइज
रुख प्लेटानस एक्स हिस्पानिका यो प्रायः सडक र बगैंचामा रोपिएको छ किनकि यसले चिसो र धेरै रमाइलो छाया प्रदान गर्दछ। यसको अतिरिक्त, यो प्रदूषण को लागी केहि सहिष्णुता छ, र गरीब माटो मा राम्रो बढ्न सक्छ। जे होस्, यसको एक प्रमुख कमजोरी छ र त्यो यो हो कि यसको पराग एक एलर्जी हो जसले संवेदनशील व्यक्तिहरूमा हाच्छिउँ, चिलाउने र च्यात्छ, त्यसैले यदि तपाईं तिनीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ भने तपाईंले फूलमा हुँदा यसको नजिक जान हुँदैन।
तर यो रूख कस्तो छ? यसको विशेषताहरू के हुन् र तपाईलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन के आवश्यक छ?
1 Platanus x hispanica को उत्पत्ति र विशेषताहरू
3 केराको छायाँको हेरचाह कसरी गर्ने ?
उत्पत्ति र को विशेषताहरु प्लेटानस एक्स हिस्पानिका
छवि - विकिमिडिया / टियागो फीरोजे
यो छाया केरा वा हाइब्रिड केरा भनेर चिनिने पातलो रूख हो, जुन बीचको क्रस हुन सक्छ। प्लेटानस ओरिएंटलिस y Platanus Occidentalis। यो 20 मिटरको उचाइमा पुग्छ, यद्यपि यो 30 मिटर पुग्न सक्छ। यसले सीधा र बलियो खोडको विकास गर्छ, जसमा हरियो छाल हुन्छ, जसलाई फ्याँक्दा भित्री बोक्रामा रातो र पहेँलो धब्बा छोड्छ।
पातहरु केहि म्यापलहरु संग एक निश्चित समानता छ, त्यसैले यो एक संग भ्रमित हुन सक्छ। छन् तिनीहरू पाल्मेट हुन्,5लोबहरू जसको मार्जिन दाँत भएका छन्। स्नायुहरू हरियो-पहेंलो हुन्छन्। तिनीहरू लगभग 20 सेन्टिमिटर लामो र 30 सेन्टिमिटर चौडाइ मापन गर्छन्, र शरद वा जाडोमा - क्षेत्रको मौसममा निर्भर गर्दछ- तिनीहरू जमिनमा खस्नु अघि पहेंलो हुन्छन्।
यसका भाले र पोथी फूलहरू एउटै रूखमा पाइन्छ, किनभने यो एकल हुन्छ। यी फूलहरूमा समूहबद्ध हुन्छन् र सामान्यतया पातहरू जस्तै एकै समयमा अंकुरित हुन्छन्। फलहरू infructescence मा समूहबद्ध छन्तिनीहरू गोलाकार छन् र लगभग 1-2 सेन्टिमिटर नाप्छन्। यी साना बीउ हुन्छन्।
Al प्लेटानस एक्स हिस्पानिका यसको लागि एक मात्र प्रयोग छ: Ornamental। यो ठूला बगैंचामा वा शहरी रूखहरूको भागको रूपमा एक आदर्श रूख हो। यसले छाया प्रदान गर्दछ, र हामी तल देख्नेछौं, यो माग गर्दैन।
केराको छायाँको हेरचाह कसरी गर्ने ?
यदि तपाइँ एक प्रतिलिपि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लेटानस एक्स हिस्पानिका तपाईंको बगैंचामा, तपाईंले यसलाई राम्रोसँग बढ्न सक्ने ठाउँमा राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ, किनकि यो एक ठूलो रूख हो जुन जलवायु समशीतोष्ण छ, जहाँ चार फरक मौसमहरू छन् त्यहाँ समस्या बिना मात्र समृद्ध हुन सक्छ।
यो धेरै ठूलो हुन सक्ने रूख भएकोले, यसलाई सकेसम्म चाँडो जमिनमा रोप्न सल्लाह दिइन्छ। यसरी, यो राम्रोसँग बढ्न र विकास गर्न सक्षम हुनेछ, किनभने यो एक भाँडो मा राखिएको थियो भने यो सीमित ठाउँ छैन।
तर पनि, यसलाई घमाइलो ठाउँमा र पाइपहरू र फुटपाथहरूबाट करिब दस मिटरको दूरीमा राख्नुपर्छ।अन्यथा यसले समस्या निम्त्याउँछ।
छवि - फ्लिकर / सालोमी बाइल्स
छाया केराले माग गरिरहेको छैन; तैपनि, उर्वर माटोमा राम्रो वनस्पति हुनेछ, त्यो हो, ती मा जो कार्बनिक पदार्थ मा धनी छन्। यसले समस्या बिना चूना पत्थर सहन गर्दछ।
यदि यो भाँडोमा हुन गइरहेको छ, कि त यो अझै धेरै जवान छ वा यसलाई रोप्नको लागि बगैंचामा अझै कतै छैन, यसलाई विश्वव्यापी खेती सब्सट्रेटको साथमा रोप्न सकिन्छ। यो। तर हो, यो भाँडोको आधारमा प्वाल हुनुपर्छ ताकि पानी बाहिर निस्कन सकोस्।
यो यस्तो रूख हो जसले खडेरीलाई प्रतिरोध गर्दैन, तर यो त्यस्तो रुख होइन जसलाई बारम्बार पानी हाल्नु पर्छ। सामन्यतया, गर्मीमा हामी हप्तामा3पटक पानी दिन्छौं, वा4पटक जमिन छिट्टै सुकेको देख्छौं; र बाँकी वर्ष कम।
प्रत्येक पटक हामी पानी हामी पानी पृथ्वीमा खन्याउनेछौं जबसम्म यो भिजेको देखिँदैन। यसको राम्रो फाइदा लिनको लागि, यदि यो जमिनमा भएको रूख हो भने, हामी एउटा खाडल बनाउन सक्छौं - एक प्रकारको तल्लो बाधा, लगभग5सेन्टिमिटर वा कम - ट्रंकको वरिपरि बगैंचाको उही माटोको साथ।
तिर्न दुख्दैन प्लेटानस एक्स हिस्पानिका वसन्तमा पातहरू पल्दादेखि गर्मीको अन्त्यसम्म। त्यो समयमा यो बढ्दै छ, र यसैले जब यो सबैभन्दा पोषक तत्व आवश्यक छ। तसर्थ, प्याकेजमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्दै, शाकाहारी जनावरहरूबाट थोरै धुलो वा दानेदार मल थप्न अत्यधिक सिफारिस गरिन्छ, यदि छ भने, वा एक वा दुई मुट्ठी थपेर - बोटको आकारमा निर्भर गर्दछ: ठूलो, त्यहाँ धेरै। हुनेछ। फेंक-।
यदि यो भाँडोमा छ भने, यसलाई विश्वव्यापी तरल उर्वरक (बिक्रीको लागि) संग उर्वर गर्न राम्रो हुनेछ। यहाँ), वा निर्माताको सिफारिसहरू पछ्याउँदै, गुआनो वा अल्गा एक्स्ट्र्याक्ट जस्ता प्राकृतिक तरल उर्वरकसँग।
यदि आवश्यक छ भने, तपाईं जाडोको अन्तमा यसलाई काट्न सक्नुहुन्छ। सुख्खा र भाँचिएको हाँगाहरू हटाउनुहोस्, र धेरै लामो भएको कुनै पनि काट्नुहोस्। तर रोगहरूको प्रसारणबाट बच्न पहिले कीटाणुरहित र सफा उपकरणहरू प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
यो वसन्त seedsतुमा बीउ र काट्नेबाट गुणा हुन्छ।
तक फ्रुस्ट प्रतिरोध गर्दछ -18ºC.
छवि - फ्लिकर / एन्ड्रियास रॉकस्टेन
तपाईले के सोच्नु भयो प्लेटानस एक्स हिस्पानिका?
लेखको पूर्ण मार्ग: सबै रूखहरू » फिचस » सजावटी रूखहरू » छाया केरा (प्लाटनस हिस्पानिका)